Firaisankina amin'ny HP Mini Netbook | Avy amin'ny Linux
Firaisankina amin'ny HP Mini Netbook
Omaly aho dia tsy maintsy nanala Xubuntu ny Netbook izay ampiasaiko izao ary nametraka azy aho Ubuntu, ka toy ny lojika ampiasaiko Unity.
Rehefa naneho hevitra momba izany tamin'ny alàlan'ny Twitter Ny olona sasany tsy afaka mino an'io, ary tsy mino an'io akory aho, fa io no teo am-pelatanako ary mila miasa aho taloha. Tsy handainga aminao aho Unity mandeha tsara izy io ary tiako ny fomba azo ampiharina amin'ireo karazana fitaovana ireo. Tsy maintsy nesoriko Xubuntu satria misy antony sasany, rehefa mampihetsika ny fitambarana fanalahidy sasany dia hihamangatsiaka ny zava-drehetra, na indraindray tsy mamaly ireo menus. Indraindray aho dia tsy maintsy namerina ny fivoriana mba hampiasa ny Netbook indray.
Araka ny ho takatrao, miaraka amin'ny fotoana kely hanokana ny fitadiavana vahaolana, ny zavatra azo ampiharina indrindra dia ny fampiasana zavatra mandeha tsara amin'ny voalohany. Raha nanana iso aho Linux Mint 13 Ho nametraka azy aho, fa ny teo am-pelatanako kosa Ubuntu 12.04. Hatreto dia tsy afaka mitaraina na inona na inona aho. Na dia mbola hitako aza izany Unity tsy mandeha tsara araka ny itiavako azy, farafaharatsiny ao amin'ny netbook haingana kokoa noho ny amin'ny PC io.
rehefa Xfce 4.10 miditra amin'ny Fitsapana i DebianAvy eo ho hitako izay ataoko .. Toa izany izao ny biraoko 😀
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Firaisankina amin'ny HP Mini Netbook
Naaah bro, tsy misy mitranga;), raha mbola Linux, tsy misy olana XD. Tena tsara ny sary «. ^
Ho fanampin'ny zava-misy fa ny Unity dia manohana be loatra ny mniscreens toa anao dia maritiora ny miasa miaraka amin'ireo rindranasa amin'ny efijery malalaka ¬.¬
Raha tsy dia fantatrao loatra izany, inona no ilain'ny firaisankina dia asa lalina ao anaty compiz, dia tena mila izany, ho an'ny ambiny dia mendrika ...
Heveriko fa mampiasa Unity 2D ianao
Toy izany koa!
Iray hafa izay mandeha amin'ny lafiny maizina ... = '(
Ahoana no ahafahana manana Ubuntu eo am-pelatanana (heveriko fa satria lava kokoa noho ny Mint no nivoahany).
Moral: Aza mijanona amin'ny fisintomana Mint.
o.0 Andro izao dia misintona MAYA aho.
fa maninona no atao hoe lafiny maizina?
rafitra fiasa fotsiny izy io fa tsy baiboly na koa fivavahana fa fitaovana fotsiny toa ny linux mint.
Io no eto aloha no tratra aloha Ubuntu, Debian ary distros mitovy amin'izany. Lazao azy ireo fa te-ho ao amin'ny Gnome-Fallback izao aho ary tiako izany. Ny fahatsapana fa mbola ao anaty aho gnome 2 tsy esorina 😀
Ry zalahy, ny fampiasana Ubuntu dia ara-dalàna, ny Unity dia paradigma vaovao, izay mifanaraka tsara amin'ny birao maoderina, manavao ireo olona ireo na dia maro aza no manokan-tena hanakiana izay rehetra manana ny anarana Ubuntu. Ratsy ho an'ny rindrambaiko maimaimpoana izany, andramo atambatra ny tsirairay mba tsy hisaraka amin'ny tiana, distros, na inona na inona.
Raha afaka nametraka Compiz tamin'ny sakafo diet (na mampiasa tsotra ny mpamoron-kira hafa i Ubuntu) ary tsy manary ny fandaniana vola, ny Unity dia be ranoka kokoa ary azo ampiasaina. Indrindra raha manana eritreritra ny hanala ny Unity 2D ianao.
@elav: Milamina ve ny zava-drehetra? Fantatrao ve ny zava-drehetra? Ny zanako vavy dia sahirana amin'ny Win 7 amin'ny HP Mini 110, saingy tsy azoko antoka fa miasa tsara ho azy i Linux. Efa nanana olana maro tamin'ny WiFi sy ny feo aho.
dice elav eny, eny ... mandeha tsara ny zava-drehetra. Izy irery no tsy mahatadidy amin'izao fotoana izao hoe inona ilay maodely tena izy, fa ny HP Mini, io ihany no tsy mahatadidy azy io (izay matetika mitranga amin'ny taonany ... LOL !!)
Hahaha .... (ary mihomehy aho .... na zazalahy kely aza)
Araraoty izao elav mahantra izao fa lavitra izy, rehefa miverina izy dia ho hitantsika izay lazainao, hahahaha.
Raha ny marina dia teo akaikiko teo namaky izay nosoratany izy hahahahahaha.
Amin'izao fotoana izao dia tokony ho vita ny fametrahana Debian amin'ny mini… hehe.
Nametraka fedora ho an'ny zana-drahalahiko 😀 tao amin'ny hp mini 110 aho ary mirentirenty mifamatotra amin'ny efijery ivelany, mba tsy handoro ny masony! hehehe miarahaba
Ary amin'ny farany, lasa zatra ilay mpampiasa ihany amin'ny farany ...
Salama Elav. Miarahaba anao avy amin'ny Ubuntu Studio 12.04 aho, izay nanaitra ahy tamim-pifaliana. Avy amin'ny HP Mini Netbook aho, ary miaraka amin'ny Dualboot dia manana Ubuntu 12.04 miaraka amin'ny Unity aho. Tiako ny mampiasa azy. Mba hanomezana fampisehoana tsara kokoa an'ity milina kely ity dia omeko ny fahafaha-manao ny faritra ifanakalozana ary nametraka fampiharana antsoina hoe zRam sy amin'ny 2clickupdate aho. Amin'izay aho afaka miasa miaraka amin'ny Unity 3D miaraka amin'ny fitoniana, ary amin'ny Unity 2D tena tsara tokoa.
Amin'ny solosaina finday hafa, miaraka amin'ny Core i5, tena tsy mila manao zavatra aho. Milamina ny zava-drehetra: Linux Mint, Fedora ary te-hametraka an'i Mageia aho 😀
Manana lubuntu aho ary niezaka nametraka gnome fallback, saingy tsy mety izany, inona no tokony hapetraka mba hahamendrika azy? firaisana 2d angamba ??
Amin'ny lafiny iray koa aho manana mini hp, ilay 1125la ary tiako amin'ny lubuntu izany.
Fitsapana azy io amin'ny lapoaly msi cr610 aho ary tena ahazoana aina ny miasa miaraka amin'ny firaisan-kina, na dia tsy mino aza aho fa efa azo ampiasaina izy io, raha misy, antsipiriany vitsivitsy, ny hany zavatra tsy mandeha amiko dia ny seranan-tsambo HDMI tsy mandalo ahy feo, fa ny video Eny, amin'ny fomba tsy fantatrao hoe ahoana no hamahako azy, efa nijery ireo fikirana feo aho ary nisafidy HDMI ho toy ny fivoahana namboarina ary mbola tsy henoina.
Korba dia hoy izy:
Saika hametraka Ubuntu 10.04 amin'ny HP mini aho, fa ny famakiana ity lahatsoratra ity dia natomboka tamin'ny Ubuntu 12.04 aho. Nihevitra aho fa ny 12.04 dia nangataka be loatra amin'ny Netbook ary ny marina dia, ho an'ny kely ananako dia toa hitako fa mandeha tsara io.
Mamaly an'i korba
donaholy dia hoy izy:
Ilay zavatra nolazainao tao amin'ity lahatsoratra lehibe ity dia nanjo ahy ary noho izany dia nanomboka nanadihady ny fomba fandefasana ny Unity ao XFCE (Xubuntu 12.04) aho, raha sanatria mbola misy ny te hahafanta-javatra, ny fanatanterahana ireo fitaovana ireo dia tsy very mihitsy. , izao dia ampiasako ao amin'ny netbook Acer Aspire One!
Ny rohy eto:
Mamaly an'i donaholy
Ahoana ny fomba: fanovana ny sary fidirana ao amin'ny Hotot
Miresaka momba ny Linux: Pilot